I-Casa Melinda 200 m ukusuka ogwini - I-Airbnb
I-Casa Melinda 200 m ukusuka ogwini
Atins, Maranhão, i-Brazil
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Marc
ICasa Mélinda, eyakhiwa ngo-2010, itholakala endaweni engamamitha angama-200 ukusuka olwandle.
Endlini enkulu ethule kakhulu, kunamakamelo okulala amakhulu angu-3, igumbi lokuphumula elikhulu, ikhishi elivulekile, amagumbi okugeza angu-2, izindlu zangasese ezi-2 kanye neshawa yangaphandle.
Endlini yesibili eseduze kwendlela nomsindo, kunamagumbi okulala ama-3 ngalinye elineshawa yokugezela ne-WC.
Intengo ihlanganisa ilineni nabasebenzi bendlu kusukela ngo-9 ekuseni kuya ku-11 ekuseni (ukuhlanza + ukugcinwa okuvamile).
Indlu enkulu ingama-320 m2 phansi. Uvulandi omkhulu ongu-3m ububanzi ozungeze indlu. Isikhathi esiningi sichithwa kuvulandi, efakwe kuma-hammocks, ngaphandle kwemibhede emibili noma etafuleni elikhulu elivikelwe emoyeni.
Ungakwazi nokulala ngaphandle embhedeni. Kuyinto engenakulibaleka.
Kukhona ngokufingqiwe endlini enkulu: amagumbi okulala ama-3 afaka amagumbi okulala ama-2 anemibhede eyi-2 eyodwa kanye negumbi lokulala elinemibhede emibili.
Endlini encane kukhona namagumbi okulala ama-3 esiwasebenzisela ukuhlalisa abangani nomndeni. Lawa makamelo anomsindo kancane ngoba aseduze nomgwaqo nendawo yokudlela evalwa ngabo-10:30 pm/11:00 pm. Futhi abawona ngempela umsindo ongahlangene nomunye. Yindlu encane yasebhishi ngendlela.
Kunenqwaba yemidlalo yebhodi yabancane nabadala kanye nezincwadi eziningi. Simema zonke izihambeli zethu ukuthi zishiyele lezi ezilandelayo izincwadi zazo. Siphinde sibe nekhreyithi egcwele imidlalo yasebhishi kanye nenqwaba yamamagazini ezingane we-Scrooge's.
Umbhede omkhulu ongu-1, imibhede yenetha engu-1
ubusuku obungu-7 e- Atins
4.60 out of 5 stars from 21 reviews
4.60 · 21 okushiwo abanye
Indlu ingamamitha angama-200 ukusuka olwandle kanye namamitha ayi-100 ukusuka esigcawini sedolobhana, iseduze nesitolo sokubhaka i-Atin.
Yindawo engcono kakhulu yokufinyelela ebhishi elikhulu le-kiters.
Indlu ixhunywe kuPizzeria Maresia naphambi kwePousada Lagoa do Vento (itholakala kalula).
Ngokuphambene, ngaselwandle, uhlangana nezindawo zokudlela zasebhishi, i-Bar.co, i-Pousada Guára kanye namakilabhu e-Atins KIte Boarding kanye ne-Lar Doce Mar kitesurf.
(Bheka isithombe somuzi, indlu iyindilinga ngokubomvu)
Uzobingelelwa nguTim okhuluma isiNgisi, isiPutukezi, isiFulentshi neSpanishi. Esizeni, uzothola intokazi yokuhlanza.